Warshadda dhexe ee sunta cayayaanka | Shiinaha Soo-saarayaasha Dhex-dhexaadka Sunta, Alaab-qeybiyeyaasha
Dichlormid wuxuu hagaajin karaa iska caabinta hadhuudhka ee loo yaqaan 'thiocarbamate herbicides'. Waa wakiil gaar ah oo ilaaliya si looga hortago galleyda inay waxyeeleyso galleyda dimethyl iyo acetochlor.
Pyrazolopyroxypyr waa badbaado cusub oo ay shaacisay Brighton Plant Protection Association 1999. Waxaa loo wada isticmaali karaa qaar ka mid ah doogaga si looga ilaaliyo dalagyada sida qamadiga iyo shaciirka waxyeelada.
LAMBDA CYHALTHRIN ACID waa mid ka mid ah dhexdhexaadiyaasha muhiimka ah ee sunta cayayaanka ee loo yaqaan 'pyrethroid cayayaanka,' taas oo loo isticmaali karo in lagu soo saaro iskudhaf wanaagsan oo loo yaqaan 'pyrethroids'
Waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii loo ilaalin lahaa sunta cayayaanka sida alachlor, acetochlor, chloramphenicol iyo EPTC. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida
wakiilka badbaadada acetochlor iyo sunta kale ee amide doogga si looga hortago loona xakameeyo furaha. Guud ahaan, qiyaasta waa 3-5%. Waxay noqon kartaa
kululeeya oo miscible la acetochlor.
3,3-DIMETHYL-4-ACID PENTENOIC, CAS 63721-05-1
Methylbentonitic acid waa udub dhexaad muhiim u ah pyrethroids, oo soo saari kara diclofenac iyo triflurothrin si loo soo saaro pyrethroids sida permethrin, cypermethrin iyo cyhalothrin. Tusaale ahaan, qaab dardaro cusub oo loo yaqaan 'pyrethroid-permethrin' ayaa ah in lagu daro 3,3- dimethyl-4,6 oo ay kujirto methyl bentonitic acid maadada ceyriinka ah iyo maadada chloride ferrous ee bilawga ah ee nidaamka kiimikada xiran.
Dhirta la xushay Xakamaynta cawska sanadlaha ah (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum, iyo Cyperus) iyo haramaha noocyadooda kala duwan (Amaranthus, Capsella, Portulaca) ee galley, masaggo, sokor, soya digir, laws, suuf, sonkor, calafka xoolaha dabocase, baradhada, khudaarta kala duwan, ubaxyada, iyo dalagyada garaaca wadnaha.